China Ground Screw Anchor / Screw Pile / Pole iankile ngaphandle flange Ukwenziwa kunye Factory | Zhaoyuanli
IiPiles zeScrew ezincinci
Iimpawu / Ukukhanyisa / iinqaba
I-Anchor ye-Screw eGround / i-Screw Pile / i-ankile ye-Pole ngaphandle kweflange
Into: ingqumba ye-screw / i-helical pile / i-ankile yomhlaba
Izinto eziphathekayo: Intsimbi etshisiweyo etshisiweyo ye-Q235 eshushu
Ubukhulu bokugquma: I-avareji ye-80um.
Inkonzo: Ukwenza iiankile ngokwesicelo sakho.
Isikrufu somhlaba, esikwaziwa ngokuba zii-helical piers, iiankile, iingqumba okanye iingqumba zezikrufu, zizisombululo ezisisiseko ezinzulu ezisetyenziselwa ukukhusela iziseko ezitsha okanye ukulungisa iziseko esele zikho. Ngenxa yoyilo lwazo kunye nokulula ukuyifaka, zidla ngokusetyenziswa rhoqo xa iimeko zomhlaba zithintela izisombululo zesiseko esisemgangathweni. Kunokuba afune umsebenzi omkhulu wokwemba, athontelana emhlabeni. Oku kunciphisa ixesha lokufakela, kufuna ukuphazamiseka okuncinci komhlaba, kwaye kubaluleke kakhulu ukudlulisa ubunzima besakhiwo ukulayisha umhlaba othwele.
Igama I-ankile ye-screw ephantsi / i-screw piles / i-helical piles
Ububanzi bombhobho 76mm, 89mm, 114mm
Ubunzima bodonga 3.0mm, 3.75mm, 4mm, njl
Ubude 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1600mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, njl.
Gqiba Itshiphu eshushu ifakwe igalvanized ene-avareji ye-80um
Iphakheji Iphalethi yentsimbi
Isampulu Ifumaneka, ngexesha le-7-10 iintsuku
Iimpawu I-Flexible, i-Rust-proof, inkxaso elungileyo yoxinzelelo
* Bamba umhlaba ngokuqinileyo
* Yomelele kwaye yomelele
* Iindleko ezisebenzayo
* Ukonga ixesha: akukho kugrunjwa kwaye akukho konkrithi
* Kulula kwaye kuyakhawuleza ukuyifaka
* Ubomi obude
* Imeko-bume enobubele: akukho monakalo kwindawo engqongileyo
* Isebenziseka kwakhona: iyakhawuleza kwaye ayibizi kakhulu ukufuduka
* Ukumelana nokubola, njl
Imifanekiso yereferensi yakho
I-screw yombhobho yiyona nto iyiyo - i-screw yomhlaba wepayipi eyenzelwe ukubamba ityhubhu yentsimbi ngaphakathi kwayo. Lo mzekelo ufanelekile njengesiseko seempawu zendlela, imigqomo yenkunkuma kunye nocingo lwexeshana. Ifumaneka ngobukhulu obuninzi kwaye ihlanganiswe ngokulula kunye nombhobho wentsimbi ukutshixa kwindawo kunye nokusetyenziswa kweebholiti ezine. Isikrufu sombhobho sifanelekile kufakelo lwexeshana apho ukonakalisa umhlaba kufuneka kuthintelwe, njengeepaki, iigadi, ingca, iipavumente kunye neminye imiphezulu ekufuneka ihlale injalo. Xa ufuna ukuxhasa umbhobho wensimbi kuyo nayiphi na injongo, i-screw yepayipi iyona nto ikhethekileyo.
Iinkqubo zethu zodidi oluphezulu lwezikrufu zenza iziseko ezithembekileyo zeentlobo ngeentlobo zeeprojekthi zemizi-mveliso ekhanyayo, ukusuka kwizakhiwo zokubambelela ngomthi ukuya kucingo, iibhulorho zeenyawo kunye nezikhongozeli zokugcina. Ukukhawuleza ukudibanisa ngaphandle kwesidingo seenyawo zekhonkrithi okanye ukumba, isisombululo sethu sinciphisa kakhulu iindleko zakho zokusebenza kunye nezixhobo ngelixa unciphisa impembelelo yokusingqongileyo.
Ngaphambili: I-HDG Ground isikrufu i-ankile yepali/ iingqumba zokujija /ingqumba ye-helical yenkqubo yokufakwa komhlaba
Okulandelayo: Umqhubi wepali yesandla/i-rammer ye-U yocingo lwepali yomthi
Iimfumba zeGround Screw zeGalvanized Ground Screw PileHelix
Isakhiwo A, Guangxin Yiyuan, Shenhua Street, Cangzhou City, kwiPhondo Hebei